Giorgio Chiellini oo ka hadlay arrin uusan abid horay uga hadlin! (Waa maxay?) – Gool FM
Giorgio Chiellini oo ka hadlay arrin uusan abid horay uga hadlin! (Waa maxay?)
Raage March 7, 2017
(Torino) 07 Maarso 2017 – Waxaa todobaadkan dhamaadkiisa isku beegan kooxaha camaaliqooyinka ah ee Juventus vs AC Milan oo Jimcaha ku ballansan gegada Juventus Stadium.
Haddaba, mid ka mid ah laacibiinta tiirarka Bianconeri sanadihii dambe waa daafaca Giorgio Chiellini, waxaana laacibkan oo kulankan seegaya uu ka qayb galay bandhigga “E poi c’è Cattelan”, oo ka baxa hilinka Sky One, uu daboolka ka qaaday arrin dadka ka dahsoonayd.
Gaashaanka birta ah ee Juventus ayaa sheegay kooxdii uu yaraantiisii taageeri jirey isagoo leh: “Waxaan taageeri jirey Milan, mataankayguna wuxuu taageerayay Juventus. Ninka aan ku daydo wuxuu ahaa Paolo Maldini”.
Taageerayaasha Arsenal oo ku banaan baxay Wenger ka hor ciyaarta (SAWIRRO)
HORDHAC: Manchester City Vs. Stoke